Maxamed: Dhaawacii waan ka soo bogsanayaa
Arday qaadaysa dhaawacii Maxamed Qaasim
Max'ed Qaasim oo ka mid ah ardaydii ku dhaawacantay qaraxii Hotel Shamow ayaa sheegay in caafimaadkiisu soo fiicnaanayo.
Maxamed Qaasim oo ka mid ahaa ardaydii ku dhaawacantay qaraxii Hotel Shaamow, haatana lagu daweynayo cusbitaal ku yaalla magaalada Riyad ee dalka Sacuudiga ayaa VOA-da uga warramay dhaawacii soo gaaray iyo xilligan sida uu yahay caafimaadkiisa.
Maxamed Qaasim wuxuu sheegay in qaraxii Shaamow uu dhaawac culus gaarsiiyay dhowr xubnood oo ka tirsan jirkiisa oo ay ku jirto firir ka galay labada indhood taasoo mid ka mid ah indhihiisa uu ku waayay dhaawacaasi. Maxamed Qaasim wuxuuna sheegay in tan iyo markii 14 December la keenay cisbitaalka ku yaalla Sacuudiga uu helay daryeel caafimaad oo aad u sareeya haatana uu ka soo kabsanayo dhaawaca intiisii badneyd. Maxamed wuxuu xusay inuu dhawaan rajaynayo inuu ka baxo cusbitaalka.
Maxamed Qaasim, wuxuu ka mid ahaa ardaydii dhakhaatiirta ahaa ee maalintii qaraxu dhacay qalin jabinaysay, isagoo muddo ku dhawaad 6 sano ah maaddada caafimaadka ka baranayay kulliyada caafimaadka ee Jaamacada Benaadir.
Wareysiga Max'ed Qaasim qeybta hoose ee qoraalkan ka dhagayso.
Wareysiga Maxamed Qaasim